Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseMartinique Breaking » Izindiza ezisuka e-USA ziya eMartinique kuma-American Airlines manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zaseMartinique Breaking • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Izindiza ezisuka e-USA ziya eMartinique kuma-American Airlines manje.
Abakwa American Airlines bazosebenzisa indiza i-Embraer 175 enezihlalo ezingama-76 ezindizeni ezithatha amahora amathathu nohhafu ezindiza ezisuka e-USA ziya eMartinique.
Njengoba kunezindawo ezingaphezu kwezingu-35 eziqhingini, i-American yinkampani yakho yezindiza eya esiQhingini saseFrance saseCaribbean saseMartinique.
IAmerican Airlines, okuyinkampani enkulu yezindiza yaseMelika, ingumlingani obaluleke kakhulu wesikhathi eside weSiqhingi Sezimbali.
Kusukela ngoNovemba 6, iAmerican Airlines izoqala ukusebenza ngokungami phakathi kweMiami International Airport kanye neFort-de-France iAimé Césaire International Airport.
Izindiza eziya eMartinique ezisuka eMelika zizoqhubeka futhi ngenxa yeAmerican Airlines. Kusukela ngoNovemba 6, ophethe uzoqala inkonzo yakhe engapheli phakathi kweMiami International Airport kanye ne-Aimé Césaire International Airport yaseFort-de-France. Izindiza zizosebenza kanye ngesonto ngeMigqibelo ngaphambi kokunyuka ziye kathathu ngesonto ngoLwesibili, ngoLwesine nangoMgqibelo ngoKhisimusi nengxenye yesibili kaFebhuwari kuya kuMashi.
"I-American Airlines, okuyinkampani enkulu yezindiza yaseMelika ingumlingani obaluleke kakhulu wesikhathi eside esiQhingini Sezimbali", ”kusho uKhomishani Wezokuvakasha eMartinique uBénédicte di Geronimo. “Yingakho sijabule kakhulu ukwamukela inkampani yethu enkulu yaseMelika nabo bonke abagibeli bayo ngezandla ezifudumele. Ukuhlangenwe nakho kweMartinique kuzokwenza izihambeli zethu zase-US zikholwe ukuthi kungani uMartinique esanda kuthola ama-Gold honours kwiTravel Weekly's 2021 Magellan Awards njenge-Eco-Friendly “Green” Destination, ebizwa nge # 1 Emerging Destination emhlabeni ngo-2021 nguTripadvisor , kungabalwa ukwehlukaniswa okubili okunikezwe muva nje yi-UNESCO kweYole Boat yethu eyingqayizivele yendabuko kanye nokunotha kwezinto eziphilayo zethu ”.
"Njengoba unezindawo ezingaphezu kwezingama-35 eziya eziqhingini, i-American yinkampani yakho yezindiza eya e-French Caribbean Island of Martinique, kusho u-Evette Negron, oyiChannel Sales Manager e-American Airlines. "Kuyinjabulo yangempela ukunikeza abahambi baseMelika ithuba lokuthola ubuhle nomlando ocebile weMartinique kukho konke ukuphepha, kusukela ngesikhathi sokubopha ibhande."
Izindiza ze-Embraer 175 ezinezihlalo ezingama-76 zizosetshenziswa ezindizeni zehora ezintathu nohhafu.